Gabriel Milito oo ka hadlay aragtidiisa la xiriirta kooxda ku haboon ee uu ku biiri karo Aguero kaddib marka uu ka tago Man City – Gool FM
(Yurub) 23 Abriil 2021. Xiddigii hore Barcelona ee Gabriel Milito ayaa ka hadlay aragtidiisa la xiriirta kooxda ku haboon uu ku biiri karo Sergio Aguero kaddib marka uu ka tago Manchester City.
Gabriel Milito ayaa si cad u tilmaamay in haddii uu weeraryahanka reer Argantina ee Sergio Aguero uu ku biiro kooxda Barcelona ay labada dhinac u noqon doonto wax aad u wanaagsan.
Aguero ayaa ku dhawaaqay in dhamaadka waayihiisa ciyaareed ee kooxdiisa haatan ee Manchester City inuu noqon doono dhamaadka xilli ciyaareedkan, islamarkaana uu raadinayo tartan cusub oo xirfadiisa ah oo ay ka buuxaan guulo shaqsiyadeed.
Haddaba wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Xiddigii hore Barcelona ee Gabriel Milito, waxaana uu yiri:
“Barcelona waa koox ku haboon Sergio Aguero, marka loo fiiriyo duruufaha jira.”
“Dadka reer Argentina, haddii ay markale kulmaan Messi iyo Aguero, taasi waxay ku noqon doontaa iyaga wax cajiib ah, maadaama bilawgii xirfadooda ay soo wada ciyaareen, waxayna noqon kartaa in dhamaadka xirfadooda ay markale wada ciyaaraan, inkasta oo aan rajeyneyno inay sii ciyaari doonaan waqti dheer.”
Taageerayaasha Barcelona ayaa rajeynaya in madaxweynaha cusub ee kooxda Joan Laporta uu dadaal ku bixin doonto sida uu Messi ugu qancin lahaa inuu la sii joogo kooxda, kaddib markii uu si cad u sheegay dhamaadka xilli ciyaareedkii hore rabitaankiisa ah inuu ka gato garoonka Camp Nou.